I-Goldcrest Post kunye nabaCebisi beCinePointe ukuba babambe iworkshop yokuhanjiswa kwefilim | Iindaba ze-NAB | I-2020 I-NAB bonisa i-Media Partner kunye noMvelisi we-NAB BONISA LIVE. Iindaba zeeNjineli zoSasazo
Ikhaya » iindaba » I-Goldcrest Post kunye nabaCebisi beCinePointe ukuba babambe iworkshop yokuhanjiswa kwefilim
I-Goldcrest Post kunye nabaCebisi beCinePointe ukuba babambe iworkshop yokuhanjiswa kwefilim
Umnyhadala weentsuku ezimbini kubabhali befilim kunye namaxwebhu aqulunqwe ngo-Okthobha i-22 kunye ne-29.
NEW YORK CITY— Goldcrest Post and CinePointe Advisors will unravel the process of preparing films for distribution in a special 2-night workshop titled Ukuhambisa ukuhanjiswa kweFilim: Yintoni ekufuneka yenziwe nguMvelisi ngamnye. Icwangciselwe u-Oktobha 22 kunye ne-29 e-Goldcrest Post eNew York, indibano yocweyo ijolise ekubonakaliseni imiboniso bhanyabhanya kunye nabavelisi beencwadi nabanye abaxanduva lokumisela uvavanyo kunye nokubeka esweni iimovie njengoko besenza indlela yabo kwimveliso yeposi.
Iiseshoni ziya kunika ulwazi malunga nemiba yezomthetho, yezobuchwephesha kunye neyomzimba yokuhanjiswa kwefilimu, igubungela izihloko ngokubanzi njengendlela yokuxoxa ngemibandela yokuhanjiswa kweenkcaza kwiinkqubo zokuhanjiswa kweenkonzo ze-OTT. Iinkokheli zendawo yokusebenzela ziya kubandakanya abaCebisi bakwaCinePointe Abacebisi kwiShishini kunye noMcebisi wezeMicimbi yezeziMali uStacey Smith, iGoldcrest Films INtloko yezeMveliso uGretchen McGowan kunye noMlawuli oLawulayo wePosta weGoldcrest.
Iindibano zocweyo zibandakanya:
Kuthetha ntoni kanye kanye “ukuhambisa” ifilimu? Ukuhanjiswa yeyona nto ibalulekileyo, inyathelo lokugqibela elifunekayo lokulungisa ifilimu ukuze isasazwe kwaye ihlawulwe. Kwaye isoloko ingumbandela wohlahlo-lwabiwo mali lwemveliso kunye nokuhamba komsebenzi. UStacey Smith wabacebisi ngeCinePointe uya kuqwalasela isigama sokuhambisa, aphule ishedyuli yokwenziwa, acacisa indlela yokuxoxa ngemibandela yokuhanjiswa ukuze asasaze ixesha kunye nemali, kunye nokubonelela ngesikhokelo ekuthinteleni imiqobo eqhelekileyo ekuhanjisweni kwezomthetho kunye namaxwebhu.
Indima yomvelisi iya isiba nzima ngakumbi ngenxa yokusondela rhoqo kokufika kwezinto ezintsha zekhamera kunye nokucacisa okunzima kweOTT. Chitha ixesha langokuhlwa neengcali zeGoldcrest Post eziya kuthi zibuyisele ikhethini “kwimilingo” yesandi kunye nemveliso post. Baza kuyonakalisa inkqubo ngenkqubo yemiboniso kwaye banike iingcebiso ngendlela yokuhambisa iprojekthi yakho ngexesha kunye nohlahlo-lwabiwo mali.
U bhaliso: www.eventbrite.com/e/demystifying-the-business-of-indie-film-producing-tickets-59717759426?aff=erellivmlt
UStacey Smith, abaCebisi ngeCinePointe
Njengomvelisi onamava kunye nomphathi wenkampani elawulayo, uStacey Smith uza nembono eyodwa ngomsebenzi wakhe wokubonisana ngemicimbi yeshishini. UStacey waqala ubudlelane bakhe obude kunye nosaziwayo bamazwe aphesheya kunye nokuzimela umenzi wefilimu U-Jim Jarmusch kwi-1997, kwaye kwiminyaka elandelayo ye-16 ubukele ukuxhaswa ngezimali, ukuvelisa, ukuhambisa kunye nokusasaza iifilimu ezibandakanya i-COFFEE NE-CIGARETTES, IIMPAHLA ZOKUQHUTYELWA NOKUVANGELA IIMBALI ZAMABHODI (ophumelele umnyhadala weCannes Film Festival Grand Prix du Jury). Kwi-CinePointe Advisors, usebenza nabavelisi ukubonelela ngoncedo olugudileyo kunye nolungenaxabiso kunye nokunceda abavelisi kunye nabatyali mali ukuphatha nokwandisa ingeniso kwiiprojekthi kulo mjikelo wokusasazwa.
UGretchen McGowan ukhokela ukubalisa kunye nokubhalwa kwemiboniso bhanyabhanya kwimiboniso bhanyabhanya yeGolide. Iiprojekthi zamva nje zibandakanya iTodd Haynes 'CAROL (Cate Blanchett, Rooney Mara), uBill Monahan kunye ne-Atlas Entertainment's MOJAVE (Oscar Isaac, Garrett Hedlund), I-Tea Shop's SLUMBER (Maggie Q), iBraveart Films' CARRIE PILBY (Nathan Lane, Bel Powley, UGabriel Byrne) kunye nefilimu yomkhosi oluzayo wase-Australia, UMNQOPHISO WOKUVUKA: IBHUNGA LOKULULA.
Ngaphambi kokujoyina i-Goldcrest, iMcGowan yavelisa ngaphezu kweefilimu ze-25 njengomvelisi ozimeleyo kunye neefilimu zikaMark Cuban ze-HDNet, iiFilimu zeSixeko esiVulekileyo kunye neBlow Up. Kwi-2014, wafumana amagama amabini e-Emmy Award ngenxa yomsebenzi wakhe kwincwadi ye-HBO, IYIPHI INDLELA ESETYENZISIWEYO NGOKU? UBOMI NAMAXESHA OKUGQIBELA IXESHA ETHERINGTON.
I-Domenic Rom, iGoldcrest Post
Umdlalo omde wobomi baseNew York basemva kwemveliso, u-Domenic Rom ungene kwiGoldcrest Post e2019. Njengomlawuli olawulayo, unoxanduva kuyo yonke imisebenzi, umbono wesicwangciso kunye nocwangciso lokukhula.
URom ngaphambili ebekhonza njengomongameli kunye nomphathi jikelele weenkonzo zokuveliswa kweposi zeDelixe TV, elandela ixesha lokuba ngumphathi weDelxe, eNew York. Usebenze njengo-vice kamongameli ophezulu kwi-Technicolor Creative Services iminyaka emithathu, kwaye wayengumlawuli kwi-PostWorks iminyaka ye-11. U-Rom waqala umsebenzi wakhe njengombala wevidiyo kwi-unitel Video. Emva kwexesha wazimanya neDuart Film Labs, apho athe waba ngumongameli olilungu le-lab kunye nemifanekiso yefilimu.
Malunga nabacebisi ngeCinePointe
Abacebisi beCinePointe basekwa kwinkolelo yokuba ubugcisa be ifilimu kufuneka ixhaswe sisicwangciso esiliqili sokushishina ukuze uphumelele kwimakethi yanamhlanje yokhuphiswano kunye etshintsha-tshintsha. Iqela lethu lisebenza nabanemali kunye nabavelisi ukubonelela ngesikhokelo seshishini, izixhobo kunye nenkxaso efunekayo ukuze imibono yokuyila ibe yimveliso enokuhanjiswa.
I-CinePointe ibonelela ngeenkonzo zokuphelisa ukuphela okuxhasa iprojekthi ngokujikeleza kobomi bayo obugcweleyo, ukubonelela ngenkqubo yeshishini elungelelanisiweyo ngelixa bekhulisa inkqubo yoyilo. Nokuba sisebenzisana nomvelisi, umbutho wemveliso, imali okanye ingxowa yokuzonwabisa, iCinePointe inikezela ngeenkonzo ezilungiselelwe ukuhambelana neemfuno zomthengi ngamnye kunye neemfuno zohlahlo-lwabiwo mali.
Malunga neGolidecrest Post
IGoldcrest Post sisibonelelo esikhokelayo, esizimeleyo semveliso yokuvelisa, ebonelela ngezisombululo ezizodwa zokumisa iifilimu, umabonwakude we-episodic, iincwadi kunye nezinye iiprojekthi. Ifumaneka ngokulula kwiLali yaseNew York kwiSixeko saseNtshona, inkampani ibonelela ngeeofisi zokuhlela, ii-dailies ezikwi-set, ukugqiba kwemifanekiso, ukuhlelwa kwesandi, i-ADR kunye nokudibanisa, kunye neenkonzo ezinxulumene noko. Iikhredithi zakutshanje zibandakanya Idola laseRashiya, intaka ephapha phezulu, Wakhe ucola, Uxolo ngokukupha, Bhiliyoni, uQhawulo-mtshato, Unsane, Isifundo seCameron Post; UJuliet, uNaked, nguyise weHarlem, Laundromat kwaye Ootata.
Ukusasazwa-SocialMeida Cobalt Encoder ukunikezelwa U sasazo ukuhlela UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli imicimbi yoshishino OTT mveliso SJGolden - Imikhonto kunye neentolo IColonie I-Colonie - Iindaba IKOLONIE / Chicago BuTeknoloji I-Ultra HD Forum 2019-10-09
Previous: Injineli eyiNtloko / Iinkonzo zoBuchule UMlawuli-OKC 191007-UNCB-118
next: I-BTS yeHlabathi yoKhenketho ibonisa iiNdawo eziDala ukuPhula imixholo ye-AR